Fandraisana fanampiana tao Taolagnaro | Primature
Mahazoarivo, 23 martsa 2021 – Ao anatin’ny iraka nampanaovin’ny Filohan’ny Repoblika hatrany, dia namarana ny diany tao Taolagnaro ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, hisolo tena ny fitondram-panjakana, handray fanampiana avy amin’ny governemanta Indiana, izay natolotry ny Ambasadaorony, Andriamatoa Abhay Kumar.
Tonga avy tamin’ny sambo mpiady Indiana ny fanampiana ka tao amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala no nandraisana izany.Nohazavain’ny Praiminisitra fa ao anatin’ny ady atao amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, indrindra ny kere, izay mahazo ny Faritra telo amin’izao fotoana izao, dia Anôsy, Androy, ary Atsimo Andrefana, dia tohana iray hanampiana an’ireo mpiray tanindrazana izao natolotry ny Ambasadaoro Indiana izao. Hozaraina amin’ireo Faritra telo voalaza ireo fanampiana ireo, ary izany dia ho tohin’ny ny ezaka efa vitan’ny governemanta Malagasy hatrizay.
“Ny firariana avy aty aminay dia ho tena tonga any amin’ny vahoaka marefo dia marefo izao fanampiana izao”, hoy izy raha nanamarika fa efa mifampiresaka ireo governoran’ny Faritra telo satria mandalo amin’ny CCOK ny fanampiana, ary ny ao no mizara amin’ny vahoaka, araka ny fandaminana mahazatra hatrizay.
Mazava fa ankoatra ny ady amin’ny corona virus dia laharam-pahamehana ho an’ny fitondram-panjakana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny Faritra Atsimo, ka notsiahivin’ny Praiminisitra tao Taolagnaro fa manao izay fomba rehetra hahafahana mamaha ny olana ny fitondram-panjakana Malagasy: “tsy maintsy hovaintsika ny tantaran’ity firenena ity: olon’ny fanovana sy ny fanavaozana isika, ary izay no tsy maintsy hanatanterahantsika ny drafitra rehetra hapetraka mba hitondrana ny fotodrafitrasa fototra, indrindra ny fotodrafitrasa mikasika ny rano”.
Vahaolana maharitra no hapetraka, hoy izy, mba hahafahan’ireo mponina mamelona ny tenany amin’ny fahafahany miasa amin’ny sehatra rehetra, indrindra ny fambolena sy ny fiompiana. Nambarany ary fa nitondra drafitra vaovao hiadiana amin’izao tsy fanjarian-tsakafo sy kere izao ny fitondram-panjakana, mba hahazoana fiantraikany maharitra, ka ny voalohany amin’izany dia ny hametrahana ny toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana (centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale), izay efa natomboka ny asa fanamboarana azy, na tao Ambovombe, na tao Amboasary Atsimo.
Ny faharoa ao anatin’izany drafitra izany dia ny tsy maintsy hanaparitahana an’ireo lavadrano (forages) izay manome rano betsaka mba hahafahana mitondra ireny rano ireny ho fisotro madio ho an’ny mponina, indrindra ihany koa, hahafahan’ny mponina mampiasa an’ireny rano ireny amin’ny fambolena na ny fiompiana izay voalaza telo aloha.Marihina, hoy ny Praiminisitra, fa ireny lavadrano rehetra ireny dia mahenika an’ireo Faritra telo, ary hohafainganina ny fanamboarana azy.
Ny fahatelo kosa dia ny fitarihana ny rano ao amin’ny toerana iray mba hahafahan’ny Faritra iray manontolo misitraka ny rano misy amin’ny toerana iray ao aminy. Ohatra amin’izany ny ao Mandrare izay tokony hositrahin’Amboasary Atsimo; ary rehefa misitraka rano Amboasary dia mbola azo tarihina hisitrahin’ny Faritra Androy izany.Tsara ho fantatra eto fa efa mandeha ny fanadihadiana rehetra hahafahana mametraka sy manangana ny fotodrafitrasa mikasika an’izany fitarihan-drano izany.
Notsiahivin’ny Praiminisitra tamin’izao famaranana ny iraka izao ihany koa fa tao anatin’ny efa-bolana no nametrahan’ny fitondram-panjakana fomba fiasa vaovao izay nampisehoana taratra fa tsy maintsy misy ny rafitra mpandinika, dia ny governoram-paritra izany, miaraka amin’ny solombavam-bahoaka sy ireo olom-boafidy aty an-toerana; ary misy koa ny rafitra mpanatanteraka, dia ny CCOK, izay natsangana satria niha-nitombo ny olona tratry ny tsy fanjarian-tsakafo taty amin’ny faritra Atsimo.
“Nanao tomban’ezaka isika ary hita fa ny fahafantarana tamin’ny alalan’ ireny isa maro isan-karazany ireny dia nahafahana nandefa ny fanampiana tany amin’ny olona tena mila izany satria maro ireo nitaraina ho tsy nahazo fanampiana” .
Nanolotra fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny Ambasadaoron’i Inde ny Praiminisitra ary nomarihiny fa nanao antso avo tamina firenena maro, ny amin’izay azo ifanampiana, i Madagasikara, ka namaly ny antso ny governemanta Indiana.
Vary 1000 taonina miampy fanafody hiadian’i Madagasikara amin’ny tazomoka no nomen’ny governemanta Indiana ho an’ny firenena Malagasy.
← Fitsidihana arak’asa tao Ambovombe sy Amboasary
Conseil du gouvernement du Mercredi 24 Mars 2021 →